Ronaldo Oo Taariikh Cusub Dhigay Iyo Zidane Oo Codsaday In La Siiyo Ixtiraam Gaar Ah
HomeChampions LeagueRonaldo Oo Taariikh Cusub Dhigay Iyo Zidane Oo Codsaday In La Siiyo Ixtiraam Gaar Ah
Weeraryahanka naadiga Real Madrid, Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey ee dhamaan kulamadii Group Yada Champions League, mid walba gool dhaliya, taariikhda, kadib markii uu goolkiisii u dambeeyey ka xareeyey kulan kooxdiisu ku garaacday naadiga Borussia Dortmund.
Tabobaraha Real Madrid, Zinedine Zidane ayaa codsaday in tix galin dheeraad ah oo la siiyo uu mudan yahay, weeraryahanka naadigiisa ee Cristiano Ronaldo, kaas oo lagu dhaliilay abaarta gool la’aaneed ee La Ligaha ka haysata xili ciyaareedkan.
32 sano jir, Ronaldo, ayaa dhaliyey goolkiisii 14 aad ee Champions League Group ka H uu Real uga dhaliyo, si uu uga caawiyo naadiga 12 ka horyaal ee naadiyada Yurub ah haysata, inay u gudbaan wareega 16 dhamaadka tartanka, oo ay kaalinta labaad u fadhiistaan Tottenham.
Ma jiro ciyaaryahan horyaalka Champions League ka dhaliyey goolal ka badan inta Ronaldo ka dhaliyey, laakiin wuxuu laba gool oo kaliya ka dhaliyey La Liga xili ciyaareedkan socda oo dhan.
“Ka Saara Cristiano liiskiina naxdinta,” ayuu yidhi Zidane.
Ronaldo, wuxuu hadda sidaas ku leeyahay 114 gool oo uu ka dhaliyey tartanka Champions League, waxaanu 17 gool ka sareeya, ninka ay ficiltamaan, xidiga Barcelona afka hore uga ciyaara ee Lionel Messi.